Afgooye oo wadaad caan ah lagu xiray | KEYDMEDIA ONLINE
Afgooye oo wadaad caan ah lagu xiray
Wararka ay Keydmedia.net ka heleyso Degmada Afgooye ee Gobalka Sh.hoose ayaa sheegaya in halkaasi laga qafaalay wadaad si weyn Degmadaasi looga yaqaanay.
Shiikha la qafaalay ayaa lagu magacaabaa Shiikh Jeylaani waxaana uu daganaa Xaafada Siigaale ee Degmada Afgooye taa oo ku taalo Gadiga kale ee Wabiga, waxaana Shiikha uu ahaa mid dadka u sameeyo adeegyo Caafimaad oo ku saleysan Dawa Soomaali.
Kooxa hubeysan oo ka tirsan Xisbiga ka taliya Degmadaasi ayaa horaantii Bisha Ramadaan sida ay wararka sheegayaan waxa ay tageen Hoygi uu ka daganaa Degmada iyagoona furay rasaas sababtay dhaawac dad deegaanka ah isla markaana isaga halkaasi ka kaxeestay.
Warar hoose ay keydmedia ka heshay degmada ayaa sheegaya in wadaadka iminka uu ku xiran yahay xabsi ka sameysay Jiingad oo ku yaala gudaha Degmadaasi isla markaana ay maamulaan xisbiga uu hogaamiya Xasan Daahir Aweys.
Talaabada lagu xiray shiikhan ayaa waxaa si weyn uga carooday Dadka deegaanka wallow ay aanu jirin talaabo shacabka ay ka qaadi karaan kooxaha hubeysan oo iyaga aan inta badan tix galin codsiyada shacabka iyo danahooda